XOG: Mudanayaal katirsan baarlamaanka Puntland oo kulan la yeenaya Madaxweyne Farmaajo, Maxayse kala hadlayaan?
October 19, 2019 Mahad Jama 3
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes, wuxuu ogaaday in Mudanayaal katirsan baarlamaanka Puntland oo kasoo laabtay dalka Uganda oo ay u tageen ka qeybgalka Tababar aqoon kororsi, waxayna ku hareen maalmo kahor magaalada Muqdisho, iyadoo ay xogo kala duwan kasoo baxayaan.
Warsidaha ayaa Ogaaday in mudanayaasha baarlamaanka katirsan ay doonayaan in ay la kulmaan Madaxweynaha Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar kamid ah wasiiradda kasoo jeeda Puntland ee katirsan Xukuumadda Faderaalka.
Labada dhinac, waxay ka wada hadlayaan arrimaha siyaasadda ee waqtigan taagan, waxaana xogtu sheegaysaa ina y si gaar ah uga hadlayaan qadiyadaha ku saabsan arrimaha siyaasadda kacsan.
Wasiiradda Puntland kasoo jeeda ee katirsan Xukuumadda Soomaaliya, waxay dhawaan tageen Boosaaso oo ay saacado badan kulan kula yeesheen Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo ay kala hadlayeen in uu ka baaqsado magaalada Kismaayo.
Ma suuragalin in ay safarkaas baajiyaan, waxaana soo baxaya xogo sheegaya in ay jiraan duulaan qorsheysan oo ay Xukuumadda Faderaalku doonayso in ay ku qaado Puntland, gaar ahaana iska horkeenta dadweynaha iyo dawladda Puntland.
Xildhibaanadan oo aan ku wadno dabagal dheer, ayaan ku ogaanay ka sokow balanta ay la leeyihiin Madaxweyne Farmaajo, ay ka hor is arki dooaan saaxiibada dhaw-dhaw ee Madaxweynaha oo ay kasii wada hadlayaan arrimaha siyaasadda.
Warar ku dhaw-dhaw mudanayaashan ayaa u sheegay PuntlandTimes in ay u tageen Muqdisho, sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen dawladda Faderaalka iyo Puntland, balse arrintaas ayaa kamid ah waxyaabaha aysan isku raacsaneyn Xukuumadda iyo baarlamaanka.
Maalmihii u dambeeyey si weyn ayaa loo hadal-hayaa wararka la xariira in uu jiro mooshin ka dhan ah Gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland CabdiXakiim Dhooba-Daareed, waxaana dadaalka ugu badan ku wajahan sidii arrimahan ay dhinacyadu uga hadli lahaayeen.
Dahir Nur says:
Waxaan Aaminsanahay, Dowladda Soomaaliya ee Madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisulwasaarena ka yahay ineysan Reer Puntland duulaan ku aheyn, wararkaas waa waxba kama jiraan.
Waa in horta la kala saaraa Taka Xumidda Deni iyo Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Deganaada Puntland.
Qof Quus ka taagaan sidii uu wax u maareyn lahaa Moowjado uu isku furay baa wuxuu ka dhigaa Dhibta uu u geystey dadka uu Horjoogaha u yahay baa duullaan lagu yahay.
Waxaay ila tahay iney wanaagsan tahay
DENI IYO GAAS + ODEY KORJOOGTEEYE
iney Ilaha Dhaqaalaha ay leeyihin Dadka Reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhan ku soo celiya gacanta dadweynaha.
Qandaraas 30 Sano ma ahan Maalgelin, laakiin waa dhaxal wareejin, waana nasiib darro weyn.
Emirates wuxuu ku ilaashabayaa Dekadahiisa, cid walba oo wax indha indhaysa waa og yahay, wax qarsoonna ma ahan
Midda kale Puntland waxaay hoos timaaddaa Dowladda Soomaaliya.
Soomaaliya ma ahan waddamo badan, waa waddan kaliya, wuxuuna leeyahay Dowlad kaliya, mana ahan wax u gaar ah Soomaaliya, laakiin waa wax ka jira Adduunka oo dhan, Dowladaha ka jira Adduunka waxaay garayaan tiro Ahaan 193 iyo 3 kale oo aan weli aheyn Qaran ama state buuxa,
Dhammaan Dowladahaas waxaay leeyihin Dowlad kaliya oo Dowladaha kale ee ka jira Caalamka wax la qaybsata.
Dhammaan Dowladahaas waa kala Nadaamyo duwan yihiin, laakiin
Wax u fekeraya sida Soomaali Maryooleey Adduunka kama jiraan.
Dowladda Soomaaliya waxaay dadaal badan ku bixisey Dhismaha Dowladnimada Soomaaliya, iyo iney wax ka bedesho Dhaqan abuurnay 30 Sano u dembeysey.
Sideeba Marka Isbedel siyaasadeed dhaco, gaar ahaan Xaaladda Soomaaliya oo kale Waxaa jiraya Kooxo ka soo horjeesta Isbedelka Cusub, waayo waxaay doonayaan inaan laga gudbin hab dhaqankii hore.
Tusaale Waxaa noogu filan hab dhaqanka Deni iyo Inta ku Taageersan, Deni Waxaa loo doortay inuu adeegyada ay u baahan yihiin dadka Reer Puntland gaarsiiyo.
Looma doorman Kismaayo oo la og yahay ineysan doorasho ka dhicin
Inuu u tafaxayto meel maran waxaay noqoneysaa waallida qaarkeed.
Horta hore hal arin oo muhiim ah ka ogow shicibka Puntland. Waa arin aysan u dhuun daloolin madaxa xaadirka ah ee federalka iyo kuwii ka horeeyey iyo cadowgii kala duwanaa ee puntland kusoo duuli jirey. Arinkaas oo ah, in shicibka puntland ay ogyihiin oo ay u kala baxsantahay Farah u dhaxeeya qarannimadooda iyo madaxda ama xukumada markaas xukunka haysa. Xukumad’kasta ee puntland soo martay mucaaradkeeda ayaa ka badnaa taageerayaasheeda . Madaxweeynii hore ee puntland Mudane Abdiweli maxamed caligas waxuu hantiyeey mucaaradkii ugu badnaa. Markay jidhey dowladii Gaas, waxaa puntland lagu soo qaaday weeraradii ugu badnaa ee ay puntland abid iska caabiso oo waliba ku guulaysato. Guushaasu waxay ka timid Alle subxaana wa tacaala, oo garowsiiyey shicibka puntland in maamulka markaas ka jira puntland, uusan ahayn puntland, Puntland’na aysan ahayn maamulka markaas jira ee puntland. Waxaa guusha sababay, ALLE KA SOKOW , shicib isku mawqif ka ah jiritaanka iyo sharafta iyo xornimada xaduudaha puntland. Shicibku Kumaysan nacayn xukumada wakhtigaas jidhey difaaca puntland.
Tan kale puntland waa AUTONOMOUS STATE ee ka mid ah dowlad federal ah. Autonomous state’ku waxuu leeyahay awoodo gaar u ah oo aan daahsoonayn oo uu la xaajoon karo oo qadaraas la geli karo shirkado iyo dowlado shisheeyey. Waa awood dastuuri ah ee ay puntland xaq u leedahay inkasto puntland aysan awoodaas ay si buuxda u istcmaalin oo xaqeeda u dhacsan. Waana sababaha keentay in puntlabd lala barbar dhigo maamulada yaryarka ah ee da’da yar ee ay madaxda federaalku siday doonto u maamulato ayadoo dastuurka baal maraysa.
Reer puntlandi ayagaa soo doortay xukumada Mudane Deni iyo xukumadihii ka horeeyey. Tan’na Sidii kuwii ka hore ayey mucaarad iyo taageerayaal leedahay. Waa dhaqan siyaasadeed ee ay puntland dhaxal u leedahay. Ha u fasiran in reer puntland kala guureen oo ay dhulkay dhaxalka u leeyihiin dharar cad ka dhaqaaqeen oo ay albaabada ay cadowga puntland balaqeen.
VIVA REPUBLIC OF PUNTLAND
Si kasta oo ay N&N u Tamar daran tahay hadana waxaan la dhayalsan Karin lacagta deeqaha ah ee umadda loogu dhiibay ee ay ololohooda iyo siday usoo laaban lahaayeen 2021 u adeegsanayaan.
Intaanay PL khalkhal siyaasadeed ku furin tallaabo hall qaado,waayo PL way u caraysan yihiin oo laf dhuun gashay ayay Ku noqdeen qorshohooda kusoo laabashada.
Waa maxay xildhibaanadan iimaankooda yahay lacagta ee hunguri dhaafsanaya dalkooda.
Wararkii ugu dambeeyey ee G. Sool & Somaliland oo u gaashaamatay dagaal hor leh
WAR DEG DEG AH:Puntland oo ciidamadii ugu badnaa gaysay deegaan Somaliland qabsatay & Xiisad dagaal oo….
DHAGAYSO:Ciidamo gudaha u galay magaalada ugu weyn Puntland & Qaraxyo la diyaarinayey oo gacanta lagu dhigay
DAAWO VIDEO:Turkiga oo Kaga Farxiyey Somaliya Balan Qaaday Sucuudiga Looga Soo Shaqo Doonan Doono
DAAWO:Axmed Karaash oo qaabilay madax ka socota Hay’addo Caalami ah
DHAGAYSO:Qaybo kamid ah Caasimada oo laga qaxay, Gadiid dagaal & Ciidamo
Wasiir Cawad “Dalka taageerada ugu weyn ee Dhaqaale & Siyaasadba siiya Soomaliya waa Sacuudiga”
DAAWO:Al-Shabaab oo soo bandhigtay diyaarad Maraykanku leeyahay oo ku dhacday Sh/Hoose
RW Khayre booqday shaqaalihii Turkiga ee ku dhaawacmay Qaraxii Afgooye
Taliye ku dhawaaqay dagaalka dhan ah Al-Shabaab
Caasimada labaad ee Somaliland oo lagu dilay askari ka tirsan
DAAWO:Muuse Biixi oo sameeyey fal aysan samayn madaxdii ka horeeyey & Madaxweyne ku xigeenka la dhigay Cisbitaalka Hargeysa
DAAWO:Muuse Biixi oo saxiixay in la toogto dad hor leh & Beelaha Dhulbahante, Habar Yoonis & Samaroon
Orod yahan lugihiisa kaga baxsaday xero uu ku tababaranayey